Maraykanka, 20 September 2016
Talaado 20 September 2016
Minnesota: Faahfaahin Laga Bixiyay Weerarkii Wiilka Soomaaliga
Maamulka gobolka Minnesota iyo kan magaalada St. Cloud, ayaa shir jaraa'id oo ay wada jir u qabteen shalay gelinki dambe, waxay kaga hadleen fal toorriyeyn ah oo nin Soomaali ah maalinkii Sabtida u geystay dad rayid ah gudaha suuq laga adeegto ee Minnesota.
Wiil Soomaali Ah oo Fuliyey Weerarkii Minnesota
Hoggaamiyayaasha bulshada Soomaalida ah ee magaalada St Cloud ee Gobolka Minnesota ayaa sheegaya in nin Soomaali ah oo toorrey wata uu ka dambeeyey weerar ka dhacay magaalada Saint Cloud habeen hore kaasi oo lagu dhaawacay sagaal qof.
Dad Qaraxyadii New York Lagu Tuhmayo oo la Raadinayo
Hay’adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da iyo booliiska magaalada New York ayaa raadinaya dad la tuhunsan yahay iyo xiriir laga yaabo inuu ka dhaxeeyo wax u ekaa bam oo qarxay habenkii sabtida iyo mid kale oo la helay.
Weerar Toorray oo Ka Dhacay Minnesota
Masuuliyiinta gobolka Minnesota ee dalkan Maraykank ayaa sheegay in sideed qof ay ku dhaawacmeen weerar mindi loo adeegsaday oo lagu qaaday suuq laga dukaamaysto oo ku yaalla magaalada Saint Cloud. Taliyaha Booliska ee Saint Cloud ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan booliska uu toogasho ku dilay qofkii weerarka geystay.
New York: 29 Qof oo Qarax ku Dhaawacmay
Ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay deegaanka Chelsea ee ku yaalla magaalada New York sida ay sheegeen masuuliyiinta magaaladani. Maayarka New York Bill DeBlasio ayaa sheegay in qaraxani uu ahaa mid ula kac ahaa
US oo Ka Cadhooday Markii Ruushku isugu Yeedhay Golaha Ammaanka
Safiirka Maraykanka u fadhida Qaramada Midoobay ayaa ka cadhootay hadalka ka soo baxay Ruushka oo uu ugu baaqay golaha Ammaanka Qaramada Midoobay inay yeeshaan kulan degdeg ah galabnimadii sabtida, si ay u eegaan weerarada Maraykanku ka geystay dalka Syria.
Ololaha Trump: Obama Wuxuu ku Dashay Mareykanka
Musharaxa madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump – ama ugu yaraan ololahiisa doorasho ayaa khamiistii sheegay inuu rumeysan yayah in madaxweyne Obama uu ku dhashay dalka Mareykanka, kadib sanado badan oo uu su’aalo ka keenay muwaadannimada madaxweynaha.
Obama oo Kordhinaya Qaxootiga Imanaya Mareykanka
Madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa dejiyey hadaf ah inuu dalka keeno 110,000 oo qaxooti ah sanad xisaabeedka 2017, taasi oo toban kun ka badan qorshihiisi hore.
Trump oo soo Bandhigey Qorshihiisa Dareeylka Caruurta